Buuhoodle: Saraakiisha ciidamada oo ka digey dhaq dhaqaaqyada uu wado maamulka Khaatumo ( Dhegaysi iyo Sawiro) – Radio Daljir
Diseembar 17, 2012 4:50 b 0
Buuhoodle, Dec 17, Shir Saxaafadeed lagu qabtay xarunta ciidamada Madaafiicda ee gobolka Cayn ayaa looga hadlay xaalada amaan ee gobolka arimo siyaasadeed oo jira iyo qorshayaasha ciidanka uga degsan xaalado kasoo cusboonaaday deegaanada bari ee gobolka Cayn.
Kulankan oo ay qabteen saraakiisha ciidamada ee gobolka Cayn ayaa waxaa ka qayb galay inta badan ciidamada Milatry ga ?ee gobolka Cayn, kuwaasoo ku qalabaysnaa hubka noocyadiisa kala duwan.
Waxaa kulani u muuqanayeydhoola tus Milatry iyadoo ?lagu soo bandhigay, Madaafiicda goobta ee baabuurtu jiido, qoryaha dhuumaha badan ee loo yaqaano BM 21 , Taagnigiyo, Lidka diyaaradaha, Tiknikadda fudud ee baabuurta saaran, Qoyaha Sil-Siladaha jiidda, iyo hub kale oo aad u tira badan.
Ujeeddada kulankan ayaa ugu horayn waxaa ka hadlay Taliyaha ciidamada ?aaga gobolka Cayn G/sare Ismaaciil Xaashi, Wuxuu sheegay in kulankani loo qabtay sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa nabadgelyadda isagoo sheegay inay jiraan dad khal-khal gelinaya amaanka guud ee gobolka Cayn.
Captain Maxamed Sh Cabdi Dabcasar “Tuur” oo kamid ah saraakiisha ciidanka Madaafiicda ee gobolka Cayn ayaa ka hadlay halkaasi wuxuuna ku dheeraaday ilaalinta nabadgelyada ee gobolka Cayn iyo sidii looga wada shaqayn lahaa.
Wuxuu ka jawaabey hadal dhowaan kasoo yeeray M/weynaha Maamulka Khaatumo oo ku aadanaa inay safaro ku kala bixinayaan deegaanada Waqooyi ee gobolka Cayn, isagoo tilmaamay in xiligan aysan munaasib ahayn safaradaasi.
“Xiligan suurta galmaaha inaad safaro ku tagtaan deegaanadaasi, Safarkaagii hore waxaa lagu qabsaday Widh-Widh iyo Xudun hadana waxaad rabtaa in la qabsado Horufadhi,” ayuu yiri Captain Maxamed Sh Cabdi Dabcasar “Tuur”.
Gashaanle Cabdifataax Kiisdiin oo ah taliyaha ciidamada Tiknikadda ee gobolka Cayn ayaa isna halkaasi hadal kooban ?ka jeediyey, wuxuuna sheegay in maamulka Khaatumo uu cadow ku yahay nabada gobolka Cayn.
“Dadka gobolka Cayn waxay yaqaaniin inay leeyihiin cadow Somaliland ah, ha ogaadeen inuu jiro cadow kale oo ah Mabda’a Khaatumo,” Cabdifataax Kiisdiid.
Waa kulankii u horeeyey oo noociisa ah oo lagu qabto magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn waxaana hadalkan kasoo baxay saraakiisha ciidamada ee Buuhoodle kusoo beegmaya xili xaalado xaasaasiyahi ka aloosan yihiin gobolka Cayn.